ဆံပင်တွေကျွတ်လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းနေပြီလား - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » အလှအပ » ဆံပင်တွေကျွတ်လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းနေပြီလား
ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
ဆံပင်တွေ တနေ့တခြားပါးလာတာ သတိထားမိကြမှာပေါ့။ စဉ်းစားရတာ၊ ဦးနှောက်ခြောက်ရတာများလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်ရတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ တစ်နေ့ကို ဆံပင် အပင် ၅၀ ကနေ ၁၀၀ ကြားကျွတ်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဆံပင်ကျွတ်တာ အဲဒီထက်ပိုတယ်လို့ထင်တယ်၊ မှန်ထဲကြည့်လိုက်ရင်လည်း အရင်နဲ့မတူတော့တာ သိလာတယ်၊ ခေါင်းဖြီးလိုက်တိုင်း စိတ်ညစ်ရတာ တကယ်ပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်မှာ ဆံပင်ပုံစံက သိပ်ကိုအဓိကကျပါတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေ၊ စင်တာတွေ နဲ့ ဆံသားအလှပညာရှင်တွေ ဘာလို့ ဝင်ငွေတွေကောင်းနေတယ်ထင်ပါသလဲ။ ယောကျာ်းလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံမရှိရင်၊ ဆံပင်ပျက်စီးနေရင်၊ ဆံပင်နည်းလွန်းရင် (ထိပ်ပြောင်လုလု) ဘယ်လောက်ချောနေပါစေ ကြည့်မကောင်းပါဘူး။ ဆံသားအလှအတွက် ညှပ်တယ်၊ ပုံသွင်းတယ်၊ အရောင်ဆိုးတယ် ဆိုတာ မလုပ်ဖူးတဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။ လူကြီးတွေတောင် ဆံပင်အနက်ဆိုးကြတာပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကရှိနေမှ ဖြစ်မှာ၊ အသွင်အပြင် ကြည့်ကောင်းနေဖို့ကလည်း အရေးပါတယ်လေ။
ဆံပင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပဲဆိုပေမယ့် ဆံပင်ပါးလာတာက သိသာလာပြီဆို အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဓာတ်တခုခုအားနည်းလို့လား၊ စိတ်ဖိစီးနေလို့လား၊ သောက်နေရတဲ့ ဆေးကြောင့်လား၊ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့လက္ခာဏာများဖြစ်နေမလား စသည်ဖြင့် သို့လောသို့လောတွေနဲ့ စိတ်ပူရပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပေမယ့် အဖြစ်များတာက –
အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ် (စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ အိပ်ရေးပျက်တာ အပါအဝင်)
ကလေးမွေးဖွားခြင်း/ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း (ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့်)
အာဟာရညီညွတ်အောင်မစားတာ ( အထူးသဖြင့် ပရိုတင်းစားသုံးမှုနည်းတာ)
Alopecia areata လို ထိပ်ပြောင်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ရောဂါ
ဓာတုကုထုံးတွေ (ဆေးတွေကြောင့် ဆံပင်ကွက်ပြီးကျွတ်တာ၊ ထိပ်ပြောင်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်)
သွေးအားနည်းခြင်း၊ သံဓာတ်အားနည်းခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်ရောဂါ
ဗီတာမင် B ချို့တဲ့တာ၊
အသက်ကြီးလာခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၁) အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်ပါ
ပရိုတင်းဓာတ်ဟာ ဆံပင်အတွက်အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ရှူးတွေတည်ဆောက်ရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ကိုယ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာ ပရိုတင်းဓာတ်အလုံအလောက်ပါဝင်ရဲ့လား သတိထားကြည့်ပါ။ ပဲ၊နွားနို့၊ ကြက်ဥအကာနဲ့ omega-3 fatty acids ပါဝင်မှုများတဲ့ငါးတွေစားပါ။ အပူအစပ်တွေ အရမ်းစားတာလည်း ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တယ်နော်။
(၂) ဗီတာမင်လည်း ပြည့်ပါစေ
ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက်က ဗီတာမင် A ကအရေးပါပါတယ်။ အစိမ်းရောင်များတဲ့အသီးအရွက်တွေ၊ မုန်လာဥနီနဲ့ ကြက်ဥ စားပါ။
ဗီတာမင် B12 က သွေးနီဥဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးတယ်၊ ဗီတာမင် E က သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးက ဆံပင်ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကယ်လ်စီယမ်၊ကော့ပါး၊ သံဓာတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ဇင့်ဓာတ်တွေကလည်း အရေးပါတဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ ကဖင်းပါတာတွေသောက်တာက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို အားပေးတာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ပါ။ နောက်အကျင့်ဆိုးတစ်ခုက ရေကို လုံလောက်အောင်မသောက်တာပါပဲ။ တစ်ရှူးတွေကျန်းမာရေးအတွက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်။ ဂက်စ်ပါတဲ့အချိုရည်တွေသောက်တာတော့ ရှောင်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသစိတ်က ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲ ရှေ့ကပါဝင်နေပါတယ်။ စိတ်ကို အေးချမ်းအောင်ထားနိုင်ဖို့ ဒေါသတွေလျှော့ပါ၊ ဖြေလျှော့ဖို့နည်းလမ်းရှာပါ။ တရားထိုင်တာ၊ ယောဂကစားတာတွေက အကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၅) ဆံသားကို ပြုစုပါ
ဦးရေပြားကို ဆေးအဆီနဲ့နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက ဆံပင်အမြစ်တွေကို နှိုးဆွပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ၊ လာဗင်ဒါဆီ၊ ရို့စ်မေရီ စတဲ့အဆီတွေ လိမ်းပြီး ဆံသားကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။။ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့ ဘေးဥပါဒ်ကင်းမကင်းကိုလည်း စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
(၆) ဆံပင်တွေကို ကြင်နာပါ
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဆံပင်ကို ဖြီးတဲ့အခါ၊ လျှော်တဲ့အခါ၊ ရေသုတ်တဲ့အခါ ညှာတာဖို့၊ ကြင်နာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကပါးနေလို့ ပြန်မွေးမြူနေရတဲ့ကြားထဲ ရှိတဲ့ဆံပင်လေးတွေကို ထပ်မထိခိုက်စေဖို့ပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ဆံပင်ခြောက်ခံစက်ကို အပူပြင်းပြင်းနဲ့မသုံးပါနဲ့၊ ဖြောင့်စက်တွေ အရမ်းမဆွဲပါနဲ့။ ဆံပင်အရောင် ခဏခဏမပြောင်းပါနဲ့။ ဆံသားနူးညံ့ပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ဖို့ ဆံပင်ခြောက်ခါနီးလေးမှာ hair spray တစ်မျိုးမျိုးသုံးပေးပါ။ ခေါင်းဖြီးတဲ့အခါ အရမ်းကြမ်းကြမ်းဆွဲမဖြီးပါနဲ့။
ဒီလောက်အချက်အလက်တွေ သိထားပြီးပြီဆိုတော့ ထိပ်ပြောင်မှာကို သိပ်ကြောက်မနေနဲ့တော့နော်။ ဆံသားအလှအတွက် အချိန်မီ ပြန်ကုစားလိုက်ကြပါတော့လို့။
အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ ဆံပင်ပေါက်စေမယ့် ကုထုံးတွေ
ဆံပင်အရမ်းကျွတ်နေပြီလား။ မကျွတ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ဆံပင်ပါးခြင်းကို လေဆာနဲ့ ကုကြမယ်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇှနျ 10, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇှနျ 10, 2019
Accessed Nov 16,2018.
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, စိတ်ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း
ဒေါသသိပ်မထွက်နဲ့ ဝိတ်တက်လာမယ်နော်… သတိထား!
အသက် ၃၀ ကျော်ရင် ဒါတွေမစားနဲ့တော့နော်
အဖျားကြီးနေတဲ့ကလေးကို အရေးပေါ် ဘယ်လိုပြုစုပေးမလဲ
ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း
ကင်ဆာကုထုံးခံယူနေသူတွေ စားသင့်တဲ့အာဟာရ (၇) မျိုး
လူနာများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ (မိမိ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရပိုင်ခွင့်)
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးစင်တာ
ပီကေဝါးရင်း မျိုချမိရင် အန္တရာယ်ရှိလား
အလှအပနှင့်မိတ်ကပ်, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း
မလိုချင်တဲ့ အမွေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု